Eng. Yariisow ?waxaa la qorsheeyey shirweyne ku saabsan ka qeyb-galka shacabka ee siyaasada? – Radio Daljir
Agoosto 27, 2013 4:50 b 0
Muqdisho, August 27, 2013 – Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, ?waxaa horaanta bisha September ee fooda nagu soo haysa ka dhacaya shir balaaran, kaas oo dowladda Soomaaliya ay sumad uga dhigtay shirweyne Qaran.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya oo la hadlay war-baahinta ayaa sheegay in shirkaasi yahay mid diirada lagu saarayo sidii shacabka Soomaaliyeed looga qeyb-gelin lahaa siyaasada wadanka oo dhan, si dalku u noqdo mid fur-furan.
Cabdiraxmaan Yariisow ayaa yiri ? Qorshaha dowladda ayaa ah in la qabto shirkaas qeybaha hore ee bisha Sept, waxaana laga qeyb gelin doonaa bulshada Soomaalida oo dhan, waa shirweyne Qaran oo looga hadli doono qaabka bulshada ay uga qeyb noqon karto siyaasada wadanka?
Shirka intiisa badan ayaa waxaa lagu gorfeyn doonaa dib u heshiisiin iyo arrimaha siyaasada, Afhayeenka Madaxtooyada ?wuxuu sheegay in shirka sidoo kale looga tashan doono laguna soo bandhigayo wixii lagu balamay oo ah in ay dalka ka dhacdo doorasho xor ah.
Waxaa jiray dhowr shir oo dowladda uga qeyb-gashay banaanka dalka, sidoo kale waxaa gudaha ka dhacay shir-weynihii Garsoorka iyo kii waxbarashada dalka Soomaaliya, taas ayaa shirkan ka dhegeysa mid ka mid ah shirarka waa weyn ee dib u soo noolaynta dowladnimo sida lagu sheegay warka dowladda.